လမ်းခွဲ လိုက် ကြပြီ လို့ ဝေဖန် မှတ်ချက် ပေးခံ နေရ တဲ့ ရဲရင့်အောင် နဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ တို့ စုံတွဲ – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ ရဲရင့်အောင်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ဧငြိမ်းဖြူကို တွဲမြင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်နော် ။သူတို့ရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ ပရိသတ်တွေကိုအထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတဲ့ အပြင်ခိုင်မြဲတဲ့ တွဲလက်တွေနဲ့ အတူ အေးတူပူအမျှလက်တွဲခဲ့ကြတာ သက်တမ်း(၃)နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်တဲ့အပြင် လိုက်ဖက်ညီလှတဲ့ စုံတွဲလေးတစ်တွဲ လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်သ ဘောကျရတဲ့ အနုပညာရှင် စုံတွဲတွေ ထဲက သူတို့စုံတွဲလေး တစ်တွဲအပါအဝင် ဖြစ်ပြီး နားလည်မှု ရှိရှိနဲ့လက်တွဲ ခဲ့ကြပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ အဆင်မပြေဖြစ် ကာလမ်းခွဲလိုက်ကြပြီလားလို့ မှတ်ချက်တွေ ပေးနေကြတာပါ။ သူမတို့စုံတွဲကို ချစ်ကြတဲ့ပရိသတ် တွေကတော့ အရမ်းကို စိုးရိမ်နေကြတာပါ။
လမ်းခွဲလိုက်ကြပြီ လားလို့ မှတ်ချက် ပေးခံနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ကတော့ ” မိန်းကလေးတွေက အသည်းကွဲ နေရင်တောင် အလှတော့ မပျက်မခံနိုင်ကြဘူး ”ဆိုတဲ့စာလေး ကို အေးငြိမ်းဖြူက တင်အပြီးမှာ “မျက်ရည်ကျတတ်လား? လို့ နင်ငါ့ကို မမေးနဲ့ငါ တန်ဖိုးထားတဲ့ အကြောင်းတွေ မမေးနဲ့ ဘာ့ကြောင့် တို့တွေဝေးရတာ ငါ့ကို မမေးနဲ့ မမေးနဲ့ ”ဆိုတဲ့ စာလေးကို တင်လာခဲ့တာ ကြောင့်ပရိသတ်တွေ အမျိုးမျိုး ဝေဖန်မှတ်ချက်ထင်ကြေး တွေပေးနေကြတာပါ။ပရိသတ်တွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်လေးကို လာ်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံး သာယာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
လမျးခှဲ လိုကျ ကွပွီ လို့ ဝဖေနျ မှတျခကျြ ပေးခံ နရေ တဲ့ ရဲရငျ့အောငျ နဲ့ ဧငွိမျးဖွူ တို့ စုံတှဲ
ပရိသတျကွီးရေ ရဲရငျ့အောငျလို့ ပွောလိုကျတာနဲ့ ဧငွိမျးဖွူကို တှဲမွငျကွမယျ ထငျပါတယျနျော ။သူတို့ရဲ့ အခဈြရေးကတော့ ပရိသတျတှကေိုအထူးမိတျဆကျပေးစရာမလိုတဲ့ အပွငျခိုငျမွဲတဲ့ တှဲလကျတှနေဲ့ အတူ အေးတူပူအမြှလကျတှဲခဲ့ကွတာ သကျတမျး(၃)နှဈကြျောခဲ့ပွီပဲ ဖွဈတဲ့အပွငျ လိုကျဖကျညီလှတဲ့ စုံတှဲလေးတဈတှဲ လို့လညျး ဆိုနိုငျပါတယျ။
ပရိသတျတှေ ခဈြခငျသ ဘောကရြတဲ့ အနုပညာရှငျ စုံတှဲတှေ ထဲက သူတို့စုံတှဲလေး တဈတှဲအပါအဝငျ ဖွဈပွီး နားလညျမှု ရှိရှိနဲ့လကျတှဲ ခဲ့ကွပမေယျ့ လကျရှိမှာတော့ အဆငျမပွဖွေဈ ကာလမျးခှဲလိုကျကွပွီလားလို့ မှတျခကျြတှေ ပေးနကွေတာပါ။ သူမတို့စုံတှဲကို ခဈြကွတဲ့ပရိသတျ တှကေတော့ အရမျးကို စိုးရိမျနကွေတာပါ။
လမျးခှဲလိုကျကွပွီ လားလို့ မှတျခကျြ ပေးခံနရေတဲ့ အကွောငျးအရငျး ကတော့ ” မိနျးကလေးတှကေ အသညျးကှဲ နရေငျတောငျ အလှတော့ မပကျြမခံနိုငျကွဘူး ”ဆိုတဲ့စာလေး ကို အေးငွိမျးဖွူက တငျအပွီးမှာ “မကျြရညျကတြတျလား? လို့ နငျငါ့ကို မမေးနဲ့ငါ တနျဖိုးထားတဲ့ အကွောငျးတှေ မမေးနဲ့ ဘာ့ကွောငျ့ တို့တှဝေေးရတာ ငါ့ကို မမေးနဲ့ မမေးနဲ့ ”ဆိုတဲ့ စာလေးကို တငျလာခဲ့တာ ကွောငျ့ပရိသတျတှေ အမြိုးမြိုး ဝဖေနျမှတျခကျြထငျကွေး တှပေေးနကွေတာပါ။ပရိသတျတှရေဲ့ ထငျမွငျခကျြလေးကို လျားမှတျခကျြပေးခဲ့ပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံး သာယာ ပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနေ့ ကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျနျော။
ကျောင်း သား ကျောင်း သူ အားလုံး ကာကွယ် ဆေးထိုး ပြီး မှသာ ကျောင်းဖွင့် နိုင်မည် ဟု ဆို